कसरी भयो बुटवलमा ज्याxन जाने झ,ड,प? , प्रहरीको गोxली लागेर चार जनाको मृxत्यु ५० जना घा,इ,ते – Dainik Sangalo
कसरी भयो बुटवलमा ज्याxन जाने झ,ड,प? , प्रहरीको गोxली लागेर चार जनाको मृxत्यु ५० जना घा,इ,ते
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २५, २०७८ समय: १३:४५:२२
रूपन्देहीको मोतिपुर क्षेत्रमा प्रहरी र सुकुम्बासीहरूबीच झ,ड,प हुँदा प्रहरीले गो,ली चलाएको छ । गोली लागेर ४ जनाको ज्या,न गएको छ भने ज्यान गुमाउनेमध्ये एक जनाको मात्रै सनाखत भएको छ।
मृत्यु भएकामध्ये एक जनाको मात्रै सनाखत भएको शिक्षण अस्पताल (युसिएमएस)का जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुसार मृxत्यु हुनेमा करिब ४८ वर्षीय कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका–४ का रमेश परियार रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तु वाणगंगा १० का २० वर्षीय रमेश परियारको सनाखत भएको हो। उनको बेलुका साढे ६ बजे उपचारका क्रममा ज्याxन गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ज्यान गुमाने अरु तीन जना व्यक्तिको उपचारका लागि लैजादै गर्दा बाटोमै ज्याxन गएको प्रहरीले जनाउको छ । उनीहरू तिनै जनाको सनाखत भएको छैन।
झ,ड,पमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घा,इ,तेमध्ये एक जनाको अवस्था ग,म्भी,र छ। छा,ती र पे,ट,मा ग,हि,रो चो,ट लागेका अन्य तीन ज,नाको अवस्था पनि ग,म्भी,र रहेको बताइएको छ।
Last Updated on: October 11th, 2021 at 1:45 pm